ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 10 အမျိုးသမီးများသည်ချိန်းတွေ့အမိန့်
တစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါမဆိုစည်းမျဉ်းများရှိပါသလား? ၏သင်တန်းရှိပါတယ်. သူတို့ကိုစာရေး, တကယ်တော့, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုကယဉ်ကျေးမှုကိုအေးစက်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကအခြားတစ်ဦးမှာတိုင်းရင်းသားအုပ်စုထဲကနေအခြားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်. သို့သော်, အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတရားဝင်ကျန်ကြွင်းသောကြောင့်အခြေခံစည်းမျဉ်းများရှိပါသည်. ဒီမှာရှိတယ် 10 တစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါအမျိုးသမီးများလေးစားသင့်သောပညတ်တို့ကို:
1. တစ်ဦး Times Manner အတွက်ခေါ်ဆိုမှုများသို့ပြန်သွားသည်
သူတို့ကိုကြိုက်ပုံရတယ်ခဲ့သူအားပြန်လည်ရရှိခြင်းရှေ့တော်၌မိမိတို့အချိန်ကိုယူတူအမျိုးသမီးများသည်. သင်သည်ထိုလူကိုစိတ်ဝင်စားရှိပါက, လွန်း, သင်ကအချိန်မီထုံးစံရှိသူ၏ခေါ်ဆိုခပြန်လာပါလိမ့်မည်. သင်တို့သည်ရရန်ခဲယဉ်းကစားချင်ရင်တောင်, ကျော်ရရန်မကြိုးစား 48 ကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်မပါဘဲနာရီကန့်သတ်. မြို့ပြင်သို့ထွက်ဖြစ်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ခိုင်လုံတဲ့ရှင်းပြချက်သည်. လူတိုင်းကဒီနေ့ခေတ်ဟာမိုဘိုင်းဖုန်းရှိတယ်, သို့မဟုတ်လူတိုင်းနီးပါး.
သင်ကရိုင်းချိန်းတွေ့တောတွင်း၌အမျိုးသမီးသည်ထက်လူတို့ကပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းထင်စေခြင်းငှါ. ယုံကြည်သို့မဟုတ်မ, ဤစကားမှန်သည်မဟုတ်. ဒါဟာအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုထုတ်မေးရန်ရဲစွမ်းသတ္တိရရှိရန်မလွယ်ကူပါ. အဲဒါကိုသူလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်, နှင့်သင်ဟုတ်ကဲ့ဟုပြောသည်, သင်၏အကြံအစည်ကပ်ဖို့ကြိုးစား. ့နောက်ဆုံးမိနစ်၌ဖျက်သိမ်းရန်မခေါ်ပါနဲ့. သူကသူ့အထဲသို့သင်သည်ထိုမျှလောက်မဖြစ်ကြ၏ရိုက်ချက်ရစေခြင်းငှါ,. ကောင်းစွာ, မဖြစ်ဿုံချောက, ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုအမှု၌သင်တို့ကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌သဘောတူမထားသင့်.
ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အခေတ်အသက်ကြီးလွန်းပုံပေါက်နေသလား? သင်သည်များစွာသောအမှုအရာနေဆဲအဟောင်းကျောင်းသို့သွားရာလမ်းကိုပြုနေကြသည်ကိုတွေ့ရှိဖို့အံ့အားသင့်စေခြင်းငှါ. အများစုမှာအမျိုးသားများကမုဆိုးဖြစ်ခြင်းပျော်မွေ့, အနည်းဆုံးတစ်နည်းနည်း. ကိုယ့်ကိုကိုယ်မဲပါစေ, လိုအပ်ချက်သူ့ကိုညာဖက်အချက်ပြမှုများပို့ဖြစ်လျှင်မူကားသူ့ကိုကူညီ.
သင့်ချစ်သူနှင့်အတူတစ်ဦး chit chat ပြုလုပ်ခြင်းဤခေါင်းစဉ်ကိုချန်ထားပါ! မိန်းကလေးများအကြားတစ်ဦးကိုသောက်သင့်ဖြစ်သူအကြောင်းပြောဆိုရန်များစွာပိုမိုသင့်လျော်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်. အဲဒီအကြောင်းလျှို့ဝှက်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲ, သင်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏ပထမအဆင့်စဉ်အတွင်းအားလုံးသင့်ရဲ့ muddied အတိတ်မြင်အောင်မပြကြဘူး.
တစ်ဦးကပြုံးလုပ်တက်တဲ့တန်ချိန်ထက်ပိုမိုထိုက်သည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့မျက်နှာကိုပြောင်ကိုသင့်ရဲ့အလားအလာကိုနှစ်သက်သင်၏အကောင်းဆုံးမြင်ရပေးနိုင်ပါတယ်. ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်နေစဉ်, သူ့ကိုပေါ်မှာသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစား, နှင့်အခြားယောက်ျားတွေပြီးနောက်သင်၏ဦးခေါင်းလှည့်ကိုရှောင်ကြဉ်, နေပါစေသူတို့ဖြစ်ရအံ့နည်းပူ. သူပြောနေတာဟာဘယ်ကိုနားထောင်ပါ, မျက်လုံးချင်းထိန်းသိမ်းရန်, နှင့်ဆက်ဆံခံရ. ဒါဟာလူတမျှော်လင့်တဲ့စိတ်သဘောထားင်. သင်သည်ခါးသောရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အာရုံထွေပြား, နှင့်မျက်နှာညှိုးငယ်, သူနောက်မှဖုန်းဆက်ဖို့မေ့လျော့စေခြင်းငှါ,.
လေထုဖြေလျော့ပေးခြင်း, ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်. အရာအားလုံးပဲဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပေမဲ့. သင်သည်စပ​​ျစ်ရည်ကိုအနည်းငယ်ကော့တေးသို့မဟုတ်မျက်မှန်ရှိသည်စုံစမ်းနှောင့်ခံစား. မလုပ်ပါနှင့်! ဘယ်သူမှမသင်အရက်ယမကာကိုထိကိုင်ခွင့်မပေးကပြောပါတယ်. ကိုယ့်ကြောင့်မင်းမပါဘူး. အဆိုပါရလဒ်သင်ထင်သကဲ့သို့, sexy ဖြစ်မစေခြင်းငှါ,.
7. ရွှေ Digger တူမကြည့်မရှု
သင်တို့သည်အဘယ်သို့အလိုရှိကြဘူး, သင့်ရဲ့ soulmate ရှာတွေ့, သို့မဟုတ်ယာယီငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအရင်းအမြစ်. သူသည်သင်၏ဘဏ်ဖြစ်သည်လျှင်အဖြစ်ပြုမူမပြုပါနဲ့. သူသည်သင်တို့အဘို့လက်ဆောင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်, ကလက်ခံဖို့, ဒါပေမယ့်မတောင်းဘူး. ထို့အပြင်, သူ့ကိုသင်၏ငှားရမ်းခပေးချေရန်သဘောတူကြဘူး, သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုဝယ်ယူတူခံစားတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ, သကဲ့သို့သင်တို့ကိုငွေတလစဉ်ငွေပမာဏပေးခြင်း.
အပြုအမူ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုအောက်မေ့ကြလော့သင်ဆိတ်သငယ်စဉ်အခါသင့်ရဲ့မိဘတွေကသင်ဆုံးမဩဝါဒ? ချိန်းတွေ့တဲ့အခါသူတို့သက်ဆိုင်နေဆဲ. သင့်ရဲ့အပြုအမူကိုမမေ့လျော့ခြင်းနှင့်အဖိုးတန်စကားများ "ကျေးဇူးပြု. " ကိုအသုံးပြုပြီးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြီးသားသင်သူ့ကိုကောင်းကောင်းသိလျှင်ပင် "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" လို့မထားပါနဲ့. သင့်ရဲ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်စိတ်သင်ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်ထားကြသည်ပင်လျှင်တစ်ဦး dude တူပွင့်လင်းသင့်ခြေထောက်တွေမဖြန့်ကြပါ. တစ်ဦးကသန့်စင်သောမိန်းမပင်အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၏နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်အဲဒီအသေးစားအခြေခံပညာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြောင်းမေ့လျော့တော်မပါဘူး.
သူတို့ရဲ့ကောင်လေးပေးဆောင်ခြင်းတစ်ဦးအနေနဲ့ချီးမွမ်းအမျိုးသမီးတွေမကြာခဏလုပ်နေတာမေ့လျော့တစ်ခုခုဖြစ်. အမျိုးသားများကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်ကောင်းတဲ့စကားနှင့်အမူအယာမှကျွန်တော့်အဖြစ်အထိခိုက်မခံများမှာ. သူသည်အထူးသဖြင့်သင့်အဘို့ကိုယူတင်ဝတ်အသစ်ရှပ်အင်္ကျီ၌ကြီးသောကြည့်တော်မူသောသူ၏ပြောပြရန်တွန့်ဆုတ်မထားပါနဲ့. သင့်ရဲ့အတိုးကိုသူ့အဘို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာကြောင့်ပြရန်! သူကညစာစားရန်သင့်ကိုထုတ်ကြာ? အဘယ်ကြောင့်သင်ကပြောင်းလဲမှုအတွက်တစ်ဦးနေအိမ်ဖြစ်စေညစာစားအဘို့သင့်အရပ်မှသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ကြဘူး? သင်သည်သူ၏အနှစ်သက်ဆုံးကွတ်ကီးများတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိ? ထိုစာရွက်ကိုကြည့်ပါနဲ့သူ့အဘို့ကောင်းတဲ့အသုတ်ဖုတ်. ဤကဲ့သို့သောရိုးရှင်းပြီးအမူအယာဟာ message ပို့. သူတို့သည်သင့်ဂရုစိုက်တော်မူသောသူ၏ပြသသင်အားထုတ်မှုများပြုလုပ်နေကြပါလိမ့်မယ်, လွန်း.
မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသည်? လူအတော်များများကပဲအရူးအမူးစွဲမက်ခြင်းကြောင်းငြင်းခုံကြသည်လိမ့်မယ်. ဒါပေမဲ့, ရဲ့သင်အချင်းချင်းအပေါ်မျက်စိကိုသတ်မှတ်နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်င်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှမေတ္တာ၌ပြပ်ဝပ်ဟုမဆိုစေ. သို့သော်, ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်အဝတ်အချည်းစည်းရတဲ့ရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစား. သင်သည်နမ်းပွေ့ဖက်နိုင်, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းနှောင့်နှေးတာ၎င်း၏အားသာချက်ရှိပါတယ်. သင်သည်မေတ္တာနှင့်မယ့်လိင်အောင်အကြောင်းမည်သို့အခြားသူစကားပြောနေတာကိုခံရလိမ့်မည်?